Inqaku eligqibeleleyo lokuJonga - I-Airbnb
Inqaku eligqibeleleyo lokuJonga
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-27 Mat.
I-Point Perfect ibamba ii-condos ezine ezahlukeneyo zokulala. Le yunithi yindawo yethu yePoint View. Yonwabela imbonakalo entle, ubomi belali obuyinyani kunye neBluewater Bridge edumileyo. Hlala emva kwaye uphumle kwi-patio ngelixa usonwabela ikofu yezobugcisa. Idesika yepatio yebali lesibini elibanzi ikhethekile kule condo ngokujonga umthi ophakamileyo wePoint Edward kunye nezandi zokuntlitheka kwamaza echibi ngaphaya koko.
Abanini kunye nabaphuhlisi bePoint Perfect bachulumancile kakhulu ukufumana indawo yakho yokuhlala. Baye bacinga ngayo yonke into. Nceda uzincede kuzo naziphi na izinto eziluncedo abakunike zona ukwenza ukuhlala kwakho kube kokonwaba. Esi sibini singabahlali basePoint Edward ngokwaso kwaye siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuba ukonwabele ulonwabo olulula kodwa olungaqhelekanga lobomi basezilalini. Kulapha ePoint Edward ukuba bafuna ukutyala imali kwaye babelane ngezinto abazithandayo nabanye. I-Point Edward ineepaki ezintle, iindledlana kunye neevenkile. Imijelo yamanzi iyinto yokwenene. Umlambo yindlela yokuhamba phantsi kweMichigan Avenue kwaye ichibi lingasentla. Iimarina ezimbini zihamba umgama ukusuka kwii-condos. Ngaphaya kwee-marinas uya kufumana i-Canatara Park enkulu, kubandakanya iindlela ezininzi zokufikelela elunxwemeni. Iilwandle zabo abazithandayo zidweliswe kwincwadi yesikhokelo. Ukutya nesiselo kuxhaphakile elalini kodwa sifuna ngokukodwa ukuba uzame ezona “fries” zidumileyo phantsi kwebhulorho. Leqa ukukhanya kwelanga ukuya ePoint Edward. Khawuleza undwendwele!